बिगार्ने दुर्गेश, सुधार्ने पल ! – Jagaran Nepal
बिगार्ने दुर्गेश, सुधार्ने पल !
पछिल्लो समय नायक पल शाह र मोडल तथा गायक दुर्गेश थापाको मित्रता बलियो बनेको छ । विगत एक बर्षदेखि यी दुइ नजिक छन् । दुर्गेशले गतबर्षको तिहारमा पलकी बहिनीसँग भाइटिका लगाए ।
पल र दुर्गेशको मित्रताको चर्चा सांगीतिक बजारमा खुबै हुने गर्दछ । कतिपयले त दुर्गेश जस्तो विवादित मानिससँग पल किन नजिक भएका होलान् भनेर पनि टिप्पणी गर्छन् ।दुर्गेश सांगीतिक क्षेत्रमा सर्वाधिक विवादमा आउने कलाकार हुन् । उनले, सार्वजनिक गर्ने हरेक गीतदेखि उनका विभिन्न क्रियाकलाप सधै विवादमा आउँछन् ।
दुर्गेश आफै पनि आफू बारम्बार चिप्लिने गरेको स्विकार गर्छन् । उनी भन्छन्–‘अब त राम्रो गर्छु भन्यो, केही न केही कुराले म चिप्लिहाल्छु । मलाई चर्चाको कुनै पनि लोभ छैन । चर्चामा आउनकै लागि मैले फन्डा पनि मच्चाएको होइन ।दुर्गेश पलको संगतमा आएपछि धेरै सुध्रिएका छन् ।
पलसँग सल्लाह नगरी उनले कुनै पनि काम गर्दैनन् । पलले दुर्गेशलाई उनका गीतबाट विवादित शब्द थुप्रै पटक हटाउन पनि लगाएका छन् । पल भन्छन्–‘नेपाली संगीतमा पनि सेन्सर बोर्डको आवश्यकता औल्याइएको पनि छ । अहिले दुर्गेशको सेन्सर मै भएको छु ।’
दुर्गेश पलको संगतले आफू सुध्रिएको बताउँदै गर्दा पलले आफूबाट भने सिक्न लायक कुरा केही पनि नभएको बताउँछन् । जे होस् पछिल्लो समय दुर्गेश चिप्लिने र पलले सुधार्ने भइरहेको छ ।